मिस नेवाको ट्यालेन्ट राउन्ड सम्पन्न | Machhapuchhre News | माछापुच्छ्रे न्युज
नेवा खल कास्कीले आयोजना गरेको सिजी मिस नेवा ११४० को ट्यालेन्ट राउन्ड सकिएको छ । शनिबार भएको कार्यक्रममा २२ प्रतियोगी आफ्ना प्रस्तुति राखे ।
मिस नेवामा नेवारी समुदायका १८ देखि २२ वर्षका युवती सहभागी छन् । उनीहरूले शनिबार अन्तर्निहीत प्रतिभा तथा नेवारी सम’दायमा मानिने संस्कृति प्रस्तुति राखे । ट्यालेन्ट राउन्डका निर्णायकमा शम्भुलाल श्रेष्ठ, आन्नद बज्राचार्य र रिना गोसेली थिए ।
कार्यक्रममा संस्थाका अध्यक्ष अशोक पालिखे, प्रतियोगिताका मुल संयोजक विमल श्रेष्ठ, मिस नेवा ११३८ प्रिती बुद्राचार्य, नेवा मिसा पुच कास्की अध्यक्ष मेनुका श्रेष्ठ, ल्याम्ह पुच अध्यक्ष मधुसुधन जोशी लगायतले बोलेका थिए ।
मिस नेवाले ४० हजार, ३२ इन्चको सिजी टिभी र गिफ्ट ह्याम्पर पाउने छिन् . यस्तै, उपविजेताले २५ हजार, २१ इन्चको सिजी टिभी र गिफ्ट ह्याम्पर र तेस्रा ह’नेले १५ हजार, डिभिडी प्लेयअर, गिफ्ट ह्याम्पर र प्रमाणपत्र पाउनेछन् . प्रतियोगिताका अन्य टाइटल विजेतालाई पनि पुरस्कृत गरिनेछ । उत्कृष्ट नेवारी भाषा ७ हजार र भ्युअर्स च्वाइस, मस्ट टयालेन्ट अवार्ड, बेस्ट पर्सनालिटी, बेस्ट फ्रेन्डली, बेस्ट स्माइल र फोटोजेनिकले जनही ५ हजार र प्रमाणपत्र पाउने छन् ।
नेपालमा नेवार समुदायको देशको समृद्धि, भाषा, कला, साहित्य, संस्कार, अर्थ सबै क्षेत्रमा उल्लेख्य योगदान छ । नेपाल संवत् ११३१ देखि बर्सेनि हुँदै आएको यो प्रतियोगिताको नबौ संस्करण हो । नवौं संस्करणको फाइनल चैत ८ गते पोखरा सभागृहमा हुनेछ । कार्यक्रम तालिम सयोंजक सेलिका श्रेष्ठ र तालिम सह सयोंजक प्रार्थना डगोंलले सञ्चालन गरेका हुन् ।